Fondant Recipe (yakagadzirirwa) + Vhidhiyo Yekudzidzisa - Culinary Matekiniki
Iyo Fondant Recipe Iyo Inonaka Inonaka, Iyo Yakanyanya Nyore Kushanda Nayo, Haifi Yakabvaruka Kana Kuwana Nzou Ganda.
Iyi inoyevedza maficha ndiyo inofarirwa pakati pevanozvivara vevabiki uye vehunyanzvi vabiki zvakafanana. Yakapfava, yakapfava, iri nyore. shanda pamwe uye zvinonaka zvakadaro! Iyi recipe fondant yakanaka kwazvo hauzombofaniri kutenga fondant inodhura zvakare.
Yangu fondant recipe (LMF fondant) yaive yeimwe yekutanga kuburitswa kumashure muna 2010 kumashure pandakanga ndichiri Artisan Keke Kambani uye ichiri nzira yangu yakagovaniswa.
Fondant ndiyo chaiyo inodyiwa dhadha yemwana wako wemakore masere wega wagara uchida. Kana fondant yenguva dzose ichidyiwa playdough saka marshmallow fondant inodyiwa ivhu. Inonyanya kushanduka, nyore kushandisa uye tastier yakawanda (ini handikurudzire kuti udye ivhu hazvo).
Rondedzero yangu yekufarira yakabva yagadzirwa zvakare, kuburitswazve uye kubviswa nezviuru zvevabiki, macaker uye mabloggi. Yakave yakakurumbira zvekuti yakatodaidzwa kuti LMF (liz marek fondant) neayo makuru mafeni. Ndakaudzwa kwemakore kuti kuita fond 'kwaitora nguva' kana 'kuomesera musanganisi'. Mazuva ano inozivikanwa zvakanyanya kuti kugadzira yako fondant ndiyo yakanyanya mari, inonaka uye yakapusa nzira yekuwana yemhando yepamusoro fondant.
Marshmallow Fondant vs Yakajairwa Fondant
Pandakatanga kekushongedza keke sechinhu chekutandarira muna2008, iye chete mudiwa wandaiziva nezvake ndiWilton. Ini ndaisatomboziva mamwe mabrand efondant aivapo. Ndakanga ndisingazive kuti zvakaoma kushandisa nekuti ndizvo zvese zvandaive ndajaira. Ini ndakangofungidzira kuti zvakatora 2-3 kuyedza kuvhara keke. Izvi zvaivewo pamberi pezvemagariro enhau nemapoka e facebook saka mazhinji ekubata kwangu aibva pakurwira chaiko.
Kekutanga nguva yaakamboedza kuita fondori yaive kunze kwekukosha chaiko. Ini ndakanga ndatora yekupedzisira miniti odha uye pakarepo ndakazviwana ndisina kukwana fondandi kuti ndipfuure neprojekiti yangu! Cue panic mode! Ndakatarisa kumusoro pamusoro pekuti ndogadzira sei fondant uye zvaida toni yekubika uye zvigadzirwa zvandisina. Ok rova ​​imwe. Ini ndakatarisa imwe 'yakapusa kugadzirwa fondant' nzira iyo yaingoda maviri zvigadzirwa. Marshmallows uye hupfu hwehuga. EPIC KUKUNDA. Yakatsemuka, yakabvaruka uye yaive nemafuta chaiwo? Asina chokwadi kuti izvozvo zvinogoneka sei. Mukupererwa, ndakabatanidza fondant yakundikana neinenge 1/2 pondo yezvasara wilton fondant. Ndakaisanganisa, ndokuibuditsa ndokushamisika kuti yakavhara keke zviri nyore sei! Kwete kubvarura, hapana pock mamaki, hapana mabhuru! Uye ndiyo nzira yangu yakakurumbira yekubika yekuberekwa yakazvarwa.
Kune mhedzisiro iri nani, edza kuisa ichi chidakadaka pamusoro pedu chena keke recipe uye ona kuti zvinonaka sei zviviri izvi zvinoshanda pamwechete.
Nei Uri Kuwedzera Fondant Kune Fondant?
Ini ndinowana iwo mubvunzo zvakanyanya. Ndinoiwana. Zvinotaridzika kunge kumashure zvishoma kuwedzera fondant kune iyo fondant recipe asi ndinzwe kunze.
Izvo zvinokwanisika kugadzira marshmallow fondant pasina kuwedzera iyo yakagadzirwa pre-fondant ASI haizove yakatambanuka. Hazvitomboiti. Ndinoziva vanhu vazhinji vanoita marshmallow fondant vasina kugadzirwa zvisati zvagadzirwa asi hazviitwe futi uye iwe uripano kuti udzidze nezve YAKANAKA yekumba fondant kunze uko handiti?
Icho chikonzero chekuwedzera mune iyo pre-yakagadzirwa fondant ndeyekuvandudza mashandiro eiyo yakagadzirirwa fondant uye iwe uri kunyatso kugadzira batch yakachipa yefondant iyo inogona kunge isingaite kana kuravira zvakanaka kwazvo mune yakakura batch yemhando yepamusoro, super yummy fondant.
Chii Chinodiwa Kuita?
Chitoro chakatengwa fondant chinogona kugadzirwa nezvinhu zvakawanda asi zvakajairika, chakagadzirwa kubva pashuga, zvinwiwa uye neimwe mhando yegamu (kuti riitatamure). Zvichienderana neicho chaicho kusanganiswa, yako fondant mameseji anogona kubva pane akapfava uye anonamira kune chewy kana kunyange akaomarara! Ini ndinowanzo taurira chero munhu anoti haafarire kuravira kwefondant iyo inongofarira chokoreti yezvitoro yakachipa ichienzaniswa necouverture, zvemhando yepamusoro. Haasi ese mafondant akagadzirwa akafanana!
Chero ani zvake anogona kukuudza iwe kuti zvakanaka farira ZVINO zviripo.
Marshmallow fondant haina izvo zvakawanda zvigadzirwa. Marshmallows inopa chikuru chimiro. Marshmallows ine kunyanya shuga uye gelatin. Chishoma chekupfupisa yemuriwo chinobatsira iyo fondant kubva pakuoma. Chikamu chakanakisa ndechekuti LMF inoshanda zvakanyanya kana iwe ukashandisa chaizvo zvakachipa marashi emvura anounza mutengo pabatch pasi pasi zvakanyanya.
Kudanana Kunogaronaka Kwakaipa Here?
Fondant ndechimwe chezvinhu izvo vatengi vangu vaiwanzo kundiudza ivo VAKAVENGA pamberi chaipo pe keke remuchato kuravira . Ndainyemwerera uye kugutsurira musoro ndobva ndati 'ok' asi ndaiziva kuti kana vakaravira yangu yekugadzira marshmallow fondant recipe (inonzi LMF nevateveri) ndaizovabata. Hapana kana chimwe chaigutsa kupfuura kuvapa iwo mucheka mudiki wekunakidzwa uye kuona kutaridzika kwechiso chavo kuchibva kubva 'Ini handisi kuzoda izvi' kushamisika kwakachena, kozoti kutsenga zvishoma, kunyemwerera kukuru, uye pakupedzisira 'OMG izvi zvakanaka chaizvo! ”
yakakomberedza chokoreti pipi ine caramel nzvimbo
Yangu marshmallow fondant yanga iri chombo changu chakavanzika kwemakore uye ikozvino inogona kuve yako futi.
Nyore Fondant Recipe YeVatangi
Saka iwe unoda kushanda nefondant asi iwe unotya! Ndinozviwana! Vazhinji vevatangi vanotya kushanda ne fondant nekuti ivo vakanzwa kuti zvingave zvakaoma sei kushanda navo! Asi iwe unoziva chii? Chakavanzika chekubudirira chiri chaizvo mukuzviita iwe pachako. Kana iwe uri kuwana kutsemuka, kubvarura, ganda renzou, pockmark, matema kana kunyangwe kuoma, iwe ungangove uri kushandisa chitoro-chakatengwa fondant iyo ingori yakajeka yakaipa.
Kana iwe uchinyatsoda kudzidza zvese nezve iyo hwaro hwekushongedza makeke unogona kutarisa nhepfenyuro yedu paSugar Geek Show uye kana izvozvo zvikasakubata, isu keke remuchato basics akateedzana kuda!
Iyi kamukira iri nyore kugadzira, haitore chero zvinoshamisira zvigadzirwa uye inoshanda zvakaringana mushure mekunge maigadzira (ichiri kudziya).
Unogona Kuita Kufarira Pasina Marshmallows?
Chimwe chezvinhu zvinotonhorera zvakambouya kubva kune yangu LMF recipe ingangove iri DKF (Danettes Kosher Fondant). Shamwari yangu Danette haakwanise kudya gelatin saka akaronga fondant recipe iyo iri nyore kuita seLMF asi inoshandisa marshmallow fluff pane yakachipa maruva emvura. Izvo zvinoshanda zvakadaro uye zviri kosher!
Matipi Ekushanda NaFondant
Heano mamwe matipi ekushandira neakagadzirwa fondant. Iwe unogona kudzidza zvakawanda nezve hwaro hwekushongedza keke mune yedu yekutanga keke yekushongedza akateedzana.
Rongedza fondant yako yakatetepa. 1/8 ″ inzvimbo yakanaka kuve kuitira kuti fondant yako irege kubvaruka, unogona kuwana iwo makona akapinza uye iwe uwane zvakanyanya kubva kune rimwe batch.
Chill makeke ako usati waavhara. Ita shuwa yako buttercream kana ganache yakanaka uye inotonhora (asi isina chando) usati wavhara keke yemhedzisiro.
Bvisa fondant yako yakakura kupfuura iwe yaunoda. Chikanganiso chakajairika chekutanga chiri kuburitsa fondant idiki uye wozowana matoni emisodzi nemisodzi kutenderedza pazasi rekeke. Kana iwe ukaburitsa chidimbu chakakura, chinozvivhara pachayo.
Mamiriro ako fondant usati waishandisa. Kunze kwekunge iwe uchingo gadzira, saka gara uchidziya yako fondant uye uikanya zvakanaka kusvika yanaka uye yakatambanuka. Cold fondant inoda kubvarura.
Kana iwe uine akawanda maturu ekuvhara, vhara iyo hombe yekutanga uye ita nzira yako pasi kune idiki diki kuti uwane zvakanyanya kubva pane yako fondant. Batch rimwe reLMF rinovhara 10 ″ -8 ″ -6 ″ kutenderera nekasara kadiki kana ukaiburitsa kuita 1/8 ″ gobvu.
Unoita Sei Iwe Ruvara Fondant?
Paunenge iwe uchinge wagona kugadzira yako inonaka yekugadzirira fondant recipe, iwe ungangoda penda yako fondant recipe . Chinokosha apa ndechekuti uve nechokwadi chekuti haushandise yakanyanya kuchenesa chikafu. Kana iwe ukashandisa zvakawandisa zvinogona kukonzera kukanganisa kusagadzikana kwechinhu chako uye chinoita senge chine maburi madiki mairi.
Kana iwe uchida iyo chiedza chevara che fondant iwe unogona kungo wedzera kara kadiki kune yako chena fondant asi kana iwe uchida rakanyanya kupenya ruvara kana rima mavara senge nhema fondant kana tsvuku tsvuku saka iwe unofanirwa kuwedzera iyo kara panguva yekuita kuti ive nemhedzisiro.
maitiro ekugadzira bhokisi rakatsvuka velvet keke kuravira kunoitwa pamba
Kicheni Zvishandiso Zvekugadzira Marshmallow Fondant
Kitchenaid chisanganiso Pandakatanga kushongedza, ndaive nekapfupi kechipiri-ruoko KitchenAid. Ndizvo chete zvaunoda chaizvo! Iyi kamukira inoshanda zvakanyanya kana ichigadzirwa muhukuru hwekare.
Maitiro Ekuita Kuda
Microwave 1 lb yemashiwuru mu30-yechipiri kuputika kusvika yanyungudika zvizere
Wedzera mvura yako uye dururira yakanyungudutswa marashi mumudziyo wesimina musanganisi nehadha hoko yakabatanidzwa
Wedzera mune yako kupfupisa yemiriwo
Tanga kuwedzera mune yako yose yakasviba shuga imwe kapu imwe panguva, siya imwe kapu kunze
Rega yako fondant musanganiswa pazasi kusvika wakatsetseka, izvi zvinogona kutora maminetsi mashanu kana zvakadaro
Gadzira fondant kubva mundiro ne spatula mumudziyo wako weupfu hwakasara shuga
Svetai musanganiswa kusvikira pashuga yose yeupfu yaiswa
Pisa chitoro chako chakatenga fondant kwemasekondi makumi matatu uye wobva wawedzera kune iyo marshmallow fondant
Knead kusvikira fondant inogona kutambanudzwa kunge taffy isina kutyora
Kuti uite iyi recipe, iwe uchada chitoro chidiki chakatengwa fondant. Haifanire kunge iri Wilton asi ndizvo zvandinazvo pano uye zvakachipa zvakanyanya ASI unogona kuzviwana kunyange zvakachipa kana ukashandisa koponi. Ini ndinowana wandinoda kubva kuna Jo-Anns kana Michaels uye panogara paine coupon ingave online kana muapp. Iwe uchazoda kutenga iro hombe bhokisi (5 lbs) uye wozoshandisa koponi kuti uwane 40% kubviswa. Iwe unogona kusaina kuti utore makuponi chaimo muapp kana pawebhusaiti. Bhegi rimwe nerimwe re5 lb richagadzira MABHURE EMAI echisimba uye zvakachipa kwazvo kutenga iro bhokisi hombe pane kutenga rimwe diki bhokisi.
Iwe unogona zvakare kutenga fondant paAmazon uye dzimwe nguva inodhura pane kuzvitenga iwe pachako kunyangwe nekoponi uye iwe unowana kutumira kwemahara neAmazon Prime.
Chinhu chinotevera maruva emvura. Ini ndinotenga yangu kubva kuWinco asi kana iwe usina Winco, ingo tsvaga yakachipa chitoro brand marshmallows. Jet-puff inowanzo kuve yakaoma kwandiri uye yakaoma. Iwe uchazoda 1 lb bhegi. PaWinco yangu bhegi rimwe rinodhura .87!
Izvo ndizvo zvinhu zvikuru zvekugadzira marshmallow fondant iyo inonaka zvinoshamisa uye isingabvarure kana kuomeswa. Kana iwe uine mubvunzo enda kumberi uye uusiye iwo makomendi kwandiri uye usakanganwe kutarisa vhidhiyo mune yekubheka kuti ndione maitiro andinoita marshmallow fondant recipe.
Dzimwe nzira dzekubika dzauchazoda
Iyo yakanakisa vanilla keke recipe
Maitiro ekuvhara keke mune fondant
Nyore buttercream frosting recipe
Iyo yekufarira nzira iyo isingabvarure, kubvarura kana kuwana nzou ganda! Iyo yekubheka inodiwa kubva kune vanofarira zvekubheka uye nehunyanzvi makeke ekushongedza zvakafanana! Gadzirira Nguva:5 mins Nguva Yakabika:25 mins Nguva Yese:30 mins Makorori:1469kcal
▢32 oz (907 g) hupfu hwehuga yakasvinwa (inonziwo icing shuga, shuga inonaka)
▢16 oz (454 g) kwemangondo WinCo, Hy-Top, Aldi, uye Campfire zvigadzirwa zvinoshanda zvakanyanya
▢makumi maviri oz (567 g) Wilton anoda Satin Ice fondant inoshanda zvakare
▢piri tbsp (piri tbsp) mvura inodziya Kune mavara erima, shandisa 1 tbsp mvura inodziya uye 1 tbsp chikafu chemavara gel
▢4 oz (113 g) kupfupisa kwemuriwo Inonziwo machena mafuta emiriwo, trex, copha
Maitiro ekuita fondant
Simudza hupfu hwehuga uye uise parutivi muhomwe huru.
Isa miriwo kupfupisa mune yemagetsi chisanganiso mbiya.
Pisa maruva emvura mumasekondi makumi mana mu microwave iri kumusoro (kana pamusoro pechitofu pamusoro). Kurudzirai nechipunu.
Isa maruva emvura anodzokera mu microwave uye kupisa kwemamwe masekondi makumi matatu (kana pachitofu pamusoro). Kurudzirai nechipunu.
Pisai marshmallows (yekupedzisira nguva!) Kwemasekondi makumi matatu mu microwave (kana pamusoro pechitofu pamusoro). Marshmallows inofanirwa kuve ooey-gooey panguva ino uye yakagadzirira kuwedzerwa kune yakasanganiswa mbiya. Dururira mvura yako pamusoro pemvura inonaya kuti uvasunungure kubva kumativi embiya. Dururira mundiro nemiriwo kupfupisa
Chinja simira chisanganisi pane yakadzika zvakamisikidzwa (kumisikidza 1 paKitchenaid stand mixers) nehupfu hokoreketa Wedzera muhafu yeshuga yako yakasviba yakasviba, kapu yekuyera panguva, uye rega kusanganisa kwemaminetsi maviri. Zvichava zvakashata kutarisa pakutanga
Usarega kusanganisa kusvikira yanamira kumativi embiya uye inotaridzika kunge yakatsetseka. Wedzera mune imwe kapu yeshuga yeupfu.
Dhonza fondant kubva pahupfu hokoreti yekubatanidza nekuisa kupfupisa kwemuriwo paminwe yako uye uchidhonza kubva pachirauro.
Tora musanganiswa wakapfava kubva mundiro ugoisa muhombodo hombe pamwe neshuga yeupfu yakasara.
Knead kusvikira shuga yakasviba, marshmallows uye Wilton fondant inowanzo kuverengerwa. Iwe haugone kushandisa ese eupfu shuga zvichienderana nemamiriro ekunze uye izvo zvakanyatsonaka.
Dhonza fondant kunge taffy kusvikira yatambanuka uye yakatetepa. Kana kuchine nzvimbo dzakashata kana kubvaruka, dzosera zvese mu microwave kwemasekondi makumi matatu kusvika makumi mana kuti zviite kupisa chaiko uye kudhonza senge taffy nekupfupisa pamaoko ako kusvikira yadhonza isina kutyoka
Chengetedza muhomwe ye-zip-lock pakushambidzika kwemukati. Fondant inochengeta kwemwedzi muhomwe ye-zip-kukiya. Kuti ushandise zvakare, dzokororazve uye ufukidze zvakanaka kusvikira watambanudza usati washandisa. Iwe unogona kuwedzera ruvara sezvaunoda asi kune rakasviba mavara, iwe unofanirwa kuwedzera iwo panguva yekusanganisa maitiro kana iwe unogona kuwana inonamira mess.
maitiro ekugadzira bhokisi keke musanganiswa kuravira senge yakagadzirirwa kumba
kugeza sei raspberries usingatyori
ndeupi musiyano uripo pakati pemazai akaomeswa uye asina kunamwa
vanilla keke yemuchato mapikicha kubva pakutanga